Huawei Watch Fit Mara mma - Nzọụkwụ mbụ maka klaasị azụmaahịa | TeraNews.net
Huawei Watch Fit mara mma - nzọụkwụ mbụ na klaasị azụmaahịa
na-ede akwụkwọ Kravetz Pavel E bipụtara 19.03.2021
Ebere site na igwe anaghị agba nchara, Huawei Watch Fit mara mma bụ ndu nke ndị China. Ndị na-azụ ahịa anọwo na-atụ anya ihe yiri nke a n'aka Huawei. Mana ihe ohuru ndia dika umuaka ma obu ihe puru ime.
Huawei Watch Fit Mara - ị chọrọ ịdị mma na akụnụba
Oge kachasị ụtọ na ihe ọhụụ bụ ntọala ọla nke elekere. Ozugbo edochiri plastik na igwe anaghị ata nchara, smartwatch gbanwere ozugbo. Site n'ụzọ, onye na-emepụta Huawei nyere ịzụta ụdị 2 n'otu oge - maka ọlaọcha (Midnight Black) na ọla edo (Frosty White). Ọ naghị anụ isi ọla dị oke ọnụ ahịa, mana ọdịdị ahụ agbanweela nke ukwuu. Ọ bụrụ na ihe gara n'ihu otu a, mgbe ahụ, anyị, n'oge na-adịghị anya, ga-ahụ smartwatches na platinum ma ọ bụ plating gold.
Njikọ na-adịghị ike na Huawei Watch Fit Mara mma bụ eriri. Ka onye nrụpụta kwere anyị nkwa iguzogide ịgbatị, mmanụ, okpomọkụ. Ma ọdịdị nke eriri elekere a na-emesi ndị na-azụ obi ike na nke a bụ ngwa mmefu ego nkịtị. Elekere dị oke ọnụ - eriri ahụ dị egwu. Huawei chọrọ ịmalite eriri akpụkpọ anụ dị mma na ọla aka ọla. Ma ọ bụghị ya, klas azụmahịa ga-agafere ndị China.
Huawei Watch Fit Mara mma - gini bụ ihe
Igwe ihuenyo AMOLED nke 1.64 nke anụ ọhịa na-agbakwụnye akụ na smartwatches. Nakwa mkpebi ihuenyo dị mfe - 280x456 pixels. Nnukwu na otu bọtịnụ dị n'akụkụ na-egosi onye ọrụ ahụ mkpa ọ dị na ngwa ahụ.
Smart nche Huawei Watch Fit Mara mara mma nwere Huawei Lite sistemụ arụmọrụ ma hazie ya maka ụbọchị 12 nke ịrụ ọrụ na otu ụgwọ batrị. Oge elekere nwere modulu GPS etinyere, ihe mmetụta obi na mkpebi siri ike nke ogo oxygen na ọbara. Ihe niile a na-agbakwunye site na usoro nlele ahụike, n'ụdị mmemme ọzụzụ. Elekere ahụ nwere ike ịgbanye oge ịhụ nsọ na ihi ụra, na-eme nyocha elekere elekere.
Ọnụ mmalite nke smartwatches bụ $ 150 (nke dị na ahịa Europe). Enababeghị ụgwọ maka mpaghara ndị ọzọ, gụnyere China. Ebido ahia ga - abia na abali iri-abuo n’ise n’onwa iri abuo n’afọ 26.
ASUS ROG Strix GS-AX5400 - rawụta nwere ikike ịgba egwu
Torque wrenches - ụdị, nzube, otu esi ahọrọ
Matcha - ihe oriri na ihe ọ drinksụ drinksụ nwere ike ịkwadebe
Electric skuuta Xiaomi Mi Mijia Electric skuuta
Windows 10 Mee 2021 ma ọ bụ sistemụ ọhụrụ
Kedu ihe bụ "ụlọ mara mma" - onye chọrọ ya na ihe kpatara ya